माअोवादी केन्द्र भन्छ-प्रदेश ७ मा ५० बढी निकायमा जित्छौं - Everest Dainik - News from Nepal
माअोवादी केन्द्र भन्छ-प्रदेश ७ मा ५० बढी निकायमा जित्छौं
भत्किएको संगठन बनेको नेताहरुको दावी
कञ्चनपुर, चैत २५ । पार्टीमा देखिएको विभाजनले सबैभन्दा बढी संगठनमा क्षति पुगेको सुदूरपश्चिमाञ्चलका जिल्लाहरुमा माओवादी केन्द्रले संगठन निर्माणमा ठूलो फड्को मारेको छ ।
स्थानीय निकायको पुनर्संरचना अनुसार बनेका अधिकांश गाँउ र नगरपालिकामा संगठन निर्माण गरिसकेको माओवादीले स्थानीय निकायमा चुनाव अभियान समेत आक्राम बनाएको छ ।
“हिजो पार्टी फुटेपछि छिन्नभिन्न भएको अवस्था चिरियो” माओवादी केन्द्रका नेता ओम विक्रम भाट “सरल”ले एभरेष्टदैनिकडटकमसँग भने, “अहिले हामी निकै बलियो अवस्थामा पुगेका छौं । पार्टीभित्र र जनतामा नयाँ उर्जा थपिएको छ ।”
पार्टीभित्र सुदूरपश्चिम अर्थात् अहिलेको प्रदेश नं. ७ मा संगठन कमजोर भएको र त्यसका लागि जिम्मेवार नेताहरुले ध्यान नदिएको गुनासो आएपछि केन्द्रीय नेताहरु नै जिल्ला जिल्ला पुगेर संगठन निर्माणमा खटिएका छन् । माओवादीका शीर्ष नेता तथा पूर्व मन्त्री लेखराज भट्ट, सुदूरपश्चिमका अर्का ठूला माओवादी नेता खगराज भट्ट, पूर्व सभासद, वर्तमान सांसद, बिभिन्न जिल्लाका अन्य नेताहरु यतिखेर युद्धस्तरमा संगठन निर्माणका लागि खटिएको उनले बताए ।
संगठन निर्माण हुने क्रमसँगै निष्क्रिय बसेका पार्टीका शुभेच्छुक, समर्थक र कार्यकर्ताहरुले नवीकरण गर्ने र अन्य पार्टीबाट आउने क्रम समेत अचम्मलाग्दो गरी बढेको सरलले बताए । “हाम्रा सबै साथीहरु जोडिइसक्नुभयो, एमाले, कांग्रेसलगायतका पार्टीबाट समेत हजारौं साथीहरुले पार्टी प्रवेश गर्नु भएको छ ।” उनले भने, “नयाँ शक्तिमा लागेका करीब करीब फर्किसकेका छन्, माओवादी प्रवेशको अभियान नै चलेको छ ।”
याे पनि पढ्नुस कांग्रेसको घोषणापत्र सार्वजनिक, रोजगार र आर्थिक विकासमा मुख्य जोड
पार्टी प्रवेशका लागि सबैभन्दा ठूलो सफलता कञ्चनपुरमा मिलेको छ । कञ्चनपुरमा युद्दकाल अघि सामान्य अवस्थामा रहेको र युद्दकालमा घनिभूतरुपमा निर्माण भएको संगठन पार्टीमा देखिएको विभाजनका कारण टुटफूटको अवस्थाा रहेको थियो । माओवादी केन्द्रले सबै स्थानीय तहमा संगठन निर्माण गर्ने, अधिवेशन गर्ने नीति लिएसँगै कञ्चनपुरमा भने माओवादी केन्द्रले बलियो संगठन निर्माण गर्न सफल भएको हो । जिल्ला इन्चार्ज बीर बहादुर थापाका अनुसार, केही संगठनात्मक असहमति राखेर बाबुरामसँग गएका अधिकांश कायकर्ता फर्किसकेका छन् । “जिल्लास्तरका एकआध बाहेक सबै नेता फर्किसकेका छन् । वैचारिकरुपमा उनीहरुले माओवाद र विचारधाराको बिँडो समातेका थिए, केही कारणवश बाबुरामजीसँग लागे, तर अहिले आफ्नो आस्थालाई फेरी जोगाएका छन् ।” थापाले भने, “दुईचार जना आउन चाहँदैनन तर उनीहरुलाई त्यहाँ पनि बसि नसक्नु छ ।”
याे पनि पढ्नुस वैद्य र विप्लवको एउटै बोली– संशोधन र चुनाव दुबै गलत
हालैैमात्र पार्टीका शीर्ष नेता लेखराज भट्टलगायत उपस्थित रहेको एक समारोहमा नयाँ शक्तिका दर्जनौं नेताहरु माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका थिए । त्यसपछि यो साता मात्रै जिल्ला पार्टीका अन्य नेताहरुले समेत पार्टी प्रवेश गरे । नेता सरल भन्छन, “एकताको पहल जारी छ, अझै हजारौंको संख्यामा प्रवेश हुने तयारी छ । चुनाव अघि हामी पुरै बलियो अवस्थामा पुग्ने स्थिति छ ।”
५० बढी निकाय माओवादी केन्द्रले जित्ने दावी
अहिले देखिएको जनउभार र संगठन निर्माणको अवस्था हेर्दा माओवादी केन्द्रले प्रदेश नं. ७ का ८८ मध्ये ५३ वटा निकायमा जित्ने दावी गरेको छ । सरलका अनुसार, नयाँ संरचना गठन भएपछि एमाले र कांग्रेसभित्र उम्मेदवार संगठन निर्माण कै विवाद भएकोले पनि जित्न सजिलो भएको हो । उनले भने, “एमाले कांग्रेसको संगठन हिजोकै स्थानीय तहको आधारमा छ, नयाँ संरचना अनुसार उनीहरुको संगठन बनेको छैन । यसले गर्दा उनीहरुलाई उम्मेदवार नै घोषणा गर्न पनि समस्या छ । सबै तहमा विवाद छताछूल्ल देखिन्छ । यसले समेत हामीलाई फाइदा हुन्छ ।”
मतदाता नामावलीअनुसार प्रदेश नं ७ बाट १२ लाख १५ हजार ८६५ मतदाताले भोट दिन पाउने छन्। प्रदेश नं ७ मा छ लाख ७३ हजार ३२१ महिला, पाँच लाख ४२ हजार ५३० पुरुष र १४ जना तेस्रोलिङ्गी रहेक छन।
पहाडी जिल्ला र तराईका ग्रामीण क्षेत्रका कतिपय स्थानीय निकायमा माओवादी केन्द्रले जित्ने दावी गरेको छ । डडेल्धुरा जिल्ला कमिटिले आलीताल नगरपालिकामा जितको दावी गर्दै जगत पार्कीलाई उम्मेद्वार बनाएको छ । पार्की पार्टीका पोलिटब्यूरो सदस्य हुन । स्थानीयस्तरमा पार्टीको एजेण्डाका साथै स्थानीय मुद्दा र धनगढी तथा महेन्द्रनगर नगरपालिकामा भने क्षेत्रीयताको मुद्दाले प्राथमिकता पाउने हुँदा त्यहाँ कसले जित्ने बारेमा भने उम्मेदवार घोषणा नभई यकीनका साथ भन्न सकिने अवस्था छैन ।
माओवादीले दावी गरेजस्तो परिणाम नआएपनि पछिल्लो संगठनात्मक अवस्था हेर्दा माओवादीले ४० प्रतिशत भन्दा बढी निकायमा भने जित्ने अवस्था देखिएको छ । तर उम्मेद्वार कस्ता उठाउने भन्ने कुराले समेत प्रभाव अवश्य पर्ने देखिन्छ ।
ट्याग्स: Local body election 2017, Pradesh No. 7